Izixhobo zeNtengiso ze-9 zokukunceda ngokukhawuleza Yenza umxholo ongcono webhlog | Martech Zone
Ithini inqaku lokuthengisa umxholo?
Ngaba imalunga nokuphuhlisa umxholo omkhulu kunye nokuyazisa kwiindlela ezininzi zokufumana abaphulaphuli bakho?
Ewe lelona candelo likhulu. Kodwa ukuthengisa umxholo kungaphezulu koko. Ukuba umisela umda kwindlela yakho kwezi zinto zisisiseko, uya kujonga uhlalutyo kwaye uya kuqonda ukuba umxholo awukhange ubenomdla omkhulu.
I-DeleVoice kuvavanywe abathengisi be1,000 ukufumanisa ukuba yeyiphi eyona miceli mngeni mikhulu. Uluhlu lweyona mingeni mikhulu ibandakanya umgangatho womxholo, ukudala kunye nokulinganisa umxholo, kodwa yaqhubeka.
Ixesha, ngakumbi, yayingowona mceli mngeni mkhulu. Kodwa abathengisi nabo bazabalaza ngokuvelisa izimvo, italente, ukuhanjiswa, isicwangciso, ukubandakanyeka, kunye nokuhambelana. Xa zonke ezi zinto zibekwe kwixesha elibekiweyo, sifika kwingxaki.
Ke siyabona ukuba ukuthengisa umxholo, kubume bayo, kunzima ngakumbi kunokuba uninzi lwethu lulindele. Kuya kufuneka ungene kwi-mindset eqhutywa ngokufanelekileyo ukuze ufezekise zonke iinjongo ngaphakathi kwexesha elibekiweyo.
Izixhobo ezifanelekileyo zinceda kuloo nto!
Izixhobo zokuThengisa ezi-9 zokukunceda woyise imiqobo yexesha
Dibana no-Edgar -Ufuna ukugxila ekuphuhliseni umxholo omkhulu webhlog. Ukuba umntu (okanye into) unokukhathalela isahlulo sokuhambisa, uya kufumana ixesha elininzi lokugxila kwizithuba zakho ezilandelayo. U-Edgar sisixhobo esiluncedo osifunayo. Uya kucwangcisa izithuba kwinkqubo yayo, emva koko uEdgar uza kubhala ngokuzenzekelayo uhlaziyo lwenqanaba le-Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, kunye nePinterest. Isixhobo silungele ukuphinda sisebenzise umxholo wesiqhelo. Oko kuyakuqinisekisa ukuba uphawu lwakho luza kuhlala lufanelekileyo nokuba awuvelisi umxholo omtsha rhoqo njengoko ufuna.
Quora -Ukuba uswele izimvo ngezihloko onokuthi ubhale kuzo, ibhloko yombhali inokuthatha ixesha elininzi. Uzifumana phi ezi zimvo? Unokubona ukuba abo ukhuphisana nabo babhala ntoni, kodwa awufuni ukubakopa. Nalu ukhetho olungcono: jonga ukuba yintoni ekujolise kuyo kubaphulaphuli bakho.
Jonga imibuzo kudidi lweQuora efanelekileyo, kwaye uya kufumana kwangoko izihloko ezimbalwa.
Pablo Izinto ezibonakalayo zomxholo wakho zibaluleke kakhulu. Uzakufuna imifanekiso eyahlukileyo okanye imifanekiso ye-Facebook, iPinterest, iGoogle +, i-Instagram kunye nazo zonke ezinye iindlela ojolise kuzo.
NgoPablo, loo nxalenye yomsebenzi wakho kulula. Unokwenza ukubonwa okuhle kwisithuba ngasinye. Kukho imifanekiso engaphezu kwe-50K kwilayibrari, ukuze ukwazi ukuyifumana ngokulingeneyo nomxholo wakho. Emva koko, unokuzenza ngokwezifiso ngeempendulo ezivela kwisithuba, kwaye ukhethe ubungakanani obufanelekileyo beenethiwekhi ezahlukeneyo zemidiya yoluntu.
App Hemingway -Ukuhlela kuthatha ixesha elininzi, akunjalo? Nje ukuba ugqibile ukubhala iposti yebhlog, wena = ufuna ukuya kuyo ngokukhawuleza uyipapashe. Kodwa kuya kufuneka unike ingqalelo ngakumbi kwinqanaba lokuhlela; Ngaphandle koko usengozini yokupapasha uyilo olungaphelelanga kunye nesitayile esididayo.
IHemingway App yenza le nxalenye yomsebenzi wakho ukuba ibe lula njengoko ifika. Iya kubamba igrama kunye neempazamo zopelo. Kodwa ayisiyiyo yonke loo nto. Esi sixhobo siza kukwazisa ngobunzima, izihlomelo, kunye nezinye izinto eziwungxenga umyalezo.
Landela nje iingcebiso kwaye wenze umxholo wakho kube lula ukufunda.
Ukubhala -Izixhobo ezidweliswe apha ngasentla zikunceda ukuphatha imiba eyahlukeneyo yephulo lakho lokuthengisa, kodwa uthini malunga nenxalenye yokubhala? Uyazi ukuba awukwazi ukuxhomekeka kwisoftware xa isiza kuloo nto.
Kodwa ngelinye ixesha okanye elinye, unokubambeka. Uneshedyuli yomxholo ocwangciswe kakuhle kodwa awukwazi ukulawula ukubhala zonke izithuba ngexesha. Mhlawumbi uphakathi kwebhloko yombhali. Mhlawumbi bubomi nje obenzekayo kwaye kuya kufuneka ubeke ukubhala kwikhefu.
Kwimeko enjalo, inkonzo yokubhala yobungcali inokunceda kakhulu. IproEssayWriting liqonga apho unokuqesha ababhali abaziingcali abavela kwiindidi ezahlukeneyo. Uya kubanika imiyalelo kwaye baya kuzisa i-100% yomxholo owahlukileyo ngomhla wakho wokugqibela.
Ezona zincoko zilungileyo -Izincoko ezigqwesileyo yenye inkonzo yokubhala eyaziwayo. Unoku-odola iposti yebhlog kuso nasiphi na isihloko, unikwe inyani yokuba inkampani iqesha ababhali abavela kwiindawo ezahlukeneyo zokufunda. Ezona zincoko zilungileyo zamaphepha amhlophe akumgangatho ophezulu kunye nee-eBooks, kodwa unokufumana iziqwengana ezilula zomxholo nanini na uzifuna.
Le nkonzo ikuvumela ukuba usete ixesha elimiselweyo (ukusuka kwiintsuku ezili-10 ukuya kwiiyure ezi-3), kwaye ufumana isiqinisekiso sokuhanjiswa kwangexesha.
Amaphepha aPhezulu -Ukuba ucwangcisa ukuhambisa umxholo wokubhala kwixesha elide, amaPhepha aPhezulu lukhetho olukhulu. Xa ukhetha ubulungu beRuby okanye iDayimani, uya kufumana izaphulelo rhoqo. Kwaye uza kusebenza nababhali ababalaseleyo kwiqela.
Ukuba uqala ukusebenzisana nombhali othile kwaye uyayithanda into oyifumanayo, unokuphinda uqeshe ingcali efanayo kwakhona.
Ukongeza kuncedo lokubhala, amaPhepha aPhezulu abonelela ngeenkonzo zokuhlela zobungcali.
Inkonzo yokuBhala yeSabelo seBrill -Le yinkonzo yokubhala yaseBritane. Ukuba ibhlog yakho ijolise kubaphulaphuli baseBritane, umbhali waseMelika akazukufumana isitayile. Kwimeko apho, i-Brill Assignment lolona khetho lufanelekileyo.
Ababhali bahambisa umxholo ekumgangatho ophezulu kuzo zonke iintlobo zezihloko. Ukongeza kwiiposti zebhlog, unoku-odola nezifundo, iimeko zePowerPoint, iiprojekthi zoyilo lwegraphic, kunye nokunye.
Ubhalo lwaseAustralia- Ubhalo lwaseAustralia ngumbutho wokubhala ofana nabanye abambalwa esikhankanye ngasentla. Umahluko, njengoko igama ngokwalo lisitsho, kukuba ijolise kwintengiso yeAussie. Ke ukuba ufuna ababhali abavela kweli lizwe ukubetha isitayile esifanelekileyo, kulapho uyakubafumana khona.
Amaxabiso sele efikeleleka, kodwa inkampani ikwabonelela ngezaphulelo kubasebenzisi abaqhelekileyo.
Ukugcina ixesha yinto enkulu. Xa usenza iphulo lakho lokuthengisa umxholo uvelise ngakumbi, uya kuqala ukufumana ukugcwala kunye nokuqinisekisa abaphulaphuli ukuba bathathe inyathelo. Ndiyathemba ukuba izixhobo ezidweliswe apha ngasentla ziya kukunceda ufike apho.
tags: Imibhalo yase-Australiaezona zincoko zilungileyoIbhrillInkonzo yokubhala isabelo sebrillUkuThengiswa kweMpahlaizixhobo zokuthengisa umxholoiinkonzo zomxholousetyenziso lwe-hemingwaydibana no edgarpabloamaphepha aphezulu
Uyenza njani into yokuFikelela nge-imeyile kwiiTekhnoloji eziNcedisayo